बाइबल - विकिपिडिया
बाइबल इसाईहरूको पवित्र शास्त्र हो । यस धर्मशास्त्रलाई धेरै इसाईहरू परमेश्वर ले दिएको पवित्र शास्त्र मान्छन ।
युरोपको पहिले छापिएका किताबमध्ये यो बाइबल हो ।
बाइबलका धेरै पुस्तक छन्; कोही पवित्र लेख भन्दछन्, कोही राम्रो किताब मात्र पनि भन्दछन् । यो धेरै वर्ष पहिले हिब्रु, आरमाइक् र ग्रीक भाषामा लेखिएको हो । पछि यो अन्य भाषामा पनि अनुवाद गरियो । अहिले यो २००० भन्दा पनि बढी भाषाहरूमा अनुबाद भइसकेको छ ।
पहिले इसाई धर्मशास्त्रलाई पवित्र पुस्तक (ग्रिक भाषामा τὰ βιβλία τὰ ἅγια ता बिब्लिया ता हागिया) भनिन्थ्यो । बाइबल बिब्लिया भन्ने शब्द शब्दबाट बनेको हो । उच्चारणको परिवर्तन भएर, बाइबल भयो । अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा भयो।
बाइबल 1444 BC मा मोसा द्वारा दिएको थियो| बाइबल 1600 वर्ष मा लेखिएको थियो |पुरानो करार बाइबल 2000 वर्ष अगाडि नै लेखि सकिएको थियो र नया करार बाइबल 100 AD मा लेखि सकिएको थियो|
वास्तवमा बाइबल धेरै किताबहरूको समिश्रणबाट बनेको छ जो 66 पुस्तक हो। यसको पहिलो भागलाई पुरानो नियम भनिन्छ । यसमा चहीं जम्मा ३९ किताबहरूको समिश्रण गरिएको छ, यो परमेश्वर द्वारा दिएको थियो। यहुदीहरू पनि यसलाई धर्मशस्त्र मान्दछन् ।
यसको दोस्रो भागलाई नयाँ नियम भनिन्छ । यो २७ किताबहरूको सङ्ग्रह हो, जसमध्ये प्रायजसो पहिले पहिले ग्रीक भाषामा लेखिएका थिए । यो किताबको मुख्य भागमा येशू को जीवनको वारेमा लेखिएको छ । यसमा सुसमाचार नाम भएका चार भागहरू छन् । नयाँ नियममा पुराना इसाईहरूले लेखेका चिट्ठीहरू पनि छन्, प्रायजसो पावलद्वारा लेखीएका चिट्ठीहरू छन् ।
यसमा परमेश्वर को गुनगान भएका भजनहरू छन् । यसमा भविष्यवाणी किताबहरू छन्, जसमा परमेश्वर आफ्ना छानिएका मान्छेलाई दिएका सन्देशहरू छन् ।
बाइबल विद्वानहरूले बाइबलका पाण्डुलिपिहरूको “सप्रमाणताको जाँच” लाई प्रमुख आधारशिलाको रूपमा छन् । सप्रमाणताको जाँच (Authenticity Test) अनुसार कुनै लेखोटको सकलीपन, मूल हस्तलिखित गुरुकापीबाट उतारिएका प्रतिलिपिहरूको संख्या, मूल गुरुकापी तथा प्रतिलिपिहरूका बीचको समयावधि र प्रतिलिपिहरूका बीचको असङ्गतिको परिमाणको आधारमा निर्धारण गरिएको छ। यस जाँचअनुसार दौंतरी लेखोटहरूको तुलनामा बाइबलको नयाँ नियम सबभन्दा सकली लेखोट ठहर्दछ । हालसम्म नयाँ नियमका २०,००० हस्तलिखित प्रतिलिपिहरू अस्तित्वमा रहेका छन् भने पाण्डुलिपि संख्यामा नयाँ नियमपछि दोस्रो स्थान ओगट्ने होमरको इलियदको मात्र ६४३ प्रतिलिपिहरू छन् । अझ, नयाँ नियम पाण्डुलिपिहरूमध्ये सबभन्दा पुराना प्रतिलिपिहरू मौलिक रचना गरिएको समयको अत्यन्तै नजिकका छन् । साथै पाण्डुलिपिहरूबीच मात्र २% भिन्नता रहेको पाइन्छ जुनचाहिँ अधिकांशरूपमा हिज्जे र बिराम चिन्ह (punctuation) जस्ता सामान्य कुरामा सीमित छन्! पाण्डुलिपिहरूबीचको कुनै पनि अन्तरले इसाई विश्वासको एउटै पनि आधारभूत बुँदालाई फेरफार गर्दैन । यसैकारण ब्रिटिश म्युजियम (सङ्ग्रहालय) का भूतपूर्व निर्देशक तथा नयाँ नियम लेखोटका विद्वान, सर फ्रेडरिक जी केन्यनले यसरी भनेका छन्:
मौलिक रचना र त्यसको सबभन्दा पुरानो प्रमाणका मितिहरूबीचको समयावधि यति सानो छ कि त्यो वास्तवमै नगण्य छ जसको कारण पवित्र शास्त्र हामीकहाँ दुरुस्तै आइपुगेको छ भन्ने तथ्यमाथि उठ्न सक्ने शंकाको रहलपहल अंश समेत अब हटिसकेको छ । नयाँ नियमका पुस्तकहरूको सप्रमाणता र साँचोपना (integrity) दुवै अपरिवर्तनीयरूपमा स्थापित भएको मान्न सकिन्छ ।
तसर्थ, सप्रमाणताको जाँचले बाइबलको नयाँ नियमलाई प्राचीन उत्कृष्ट साहित्यमा सबभन्दा विश्वसनीय लेखोटको रूपमा रहेको प्रमाण दिन्छ! तर अन्य प्रतिष्ठित साहित्यको पाण्डुलिपिहरूलाई हेर्दा उल्लेखनीय अन्तर पाउँदछौं । उदाहरणको लागि, ट्यासीटसको एनल्स (Tacitus’s Annals) को सबभन्दा पुरानो प्रतिलिप त्यसको मौलिक रचनाभन्दा १,००० वर्ष पछिको छ अनि जम्मा प्रतिलिपिहरू संख्यामा आज २० ओटा मात्र छन् । त्यस्तै गरी सुटोनीयसको द ट्वेल्भ सिजर्स (Suetonius’s The Twelve Ceasars) को सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि त्यसको मौलिक रचनाभन्दा ८०० वर्ष पछिको छ अनि प्रतिलिपिहरू संख्यामा जम्मा ८ ओटा मात्र छन् । तुलनामा नयाँ नियमका सबभन्दा पुराना प्रतिलिपिहरू मौलिक रचनाको ५० वर्षभित्रै लेखिए अनि पाण्डुलिपिहरूको जम्मा संख्या आज झण्डै २४,००० पुगिसकेको छ ।
१. बाइबल के हो ? यो कहाँबाट आयो ? यो कसले लेख्यो ? यी प्रश्नहरु महत्त्वोपुर्ण छ्न । यी प्रश्नको उत्तर कतिलाई दुध, कतिलाई मासु, कतिलाई तितो कतिलाई मिठो लाग्ना सक्छ । आसा राखेको छु सबै जनाले आफ्नु बहुमुल्य समय दिएर पढि सुझाव दिनुहुने ।
यदि बाइबल सत्य छ भने यसलाई विस्वास नगर्ने मानिस मुर्ख हुन जान्छ । अर्को तर्फ यदि बाइबल सत्य, तथ्य छैन भने हामीले यसलाई जान्नु किन आवस्यक पर्दछ ?
माविश्वास गर्छु " जसले बाइबल अध्यन गर्छ त्यसले परमेस्वरको मन र विचार अध्यन गर्छ।"
२. बाइबल संसारिमा सबै भन्दा प्रसिद्ध पुस्तक हो । इतिहासम छापाखाना अविस्कार भए पछि सबै सबैभन्दा पहिले बाइबल छपाइएको थियो । हेरेक वर्ष सबै भन्दा बढी छपिने पुस्तकका रूपमा बाइबल चिनिन्छ । संसारमा सबै भन्दा बढी भाषाहरूमा बाइबल अनुबाद गरिएको छ । अहिलेसम्म लगभग सात अर्बभन्दा बढी बाइबल छापिसकेको पाइन्छ ।
बाइबल शब्द ग्रीक सब्द "बिब्लस" आएको हो । जसको अर्थ पुस्तक हो । बाइबललाई धेरै नाम दिएको छ परमेस्वरको वचन । हिब्रु४:१२ दुई धारे तरवार,मह, चट्टान, ज्योति आदि । बाइबल जम्म ६६ वटा पुस्तकहरूले बनेको छ । यसलाई प्रमुख दुई खण्डहरूमा बिभाजन गरिएको छ । पुरानो नियम, जसमा ३९ वटा पुस्तकहरु छ्न । नयाँ नियम जसमा २७ वटा पुस्तक छ्न । पुरानो नियम नयाँ नियमको जग हो भने नयाँ नियम पुरानो नियमको प्रकाश हो ।
नयाँ नियम: बाइबलको नयाँ नियमको खण्ड मुल रूपमा ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो । केही समय पछि ल्याटिनमा अनुबाद गरिएको थियोे । आज पाँच हजार भन्दा बढी ग्रीक पाण्डुलिपीहरु र आठ हजार भन्दा बढी ल्याटिन पाण्डुलिपिहरु र अरुपनी थुप्रै भाषाहरूमा छापिएका पाण्डुलिपीहरूले प्राचीन समय देखि नै अस्तित्वमा पाइन्छन । यीनीहरूले परमेस्वरको वचन त्यही रूपमा छ भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छन् ।
३. पुरानो नियम: पुरोनो नियमले सृष्टिको विवरण, मानिसको प्रारम्भिक इतिहास, भाषाहरु र जातिहरूको सुरुवात आदिको बारेमा विवरण दिएको छ । साथै पुरानो नियमले किन पृथ्वीमा ख्रीष्टको जन्मा मृत्यु हुनु आवस्यक थियो भन्ने सम्बन्धि कारणहरु एतिहासिक घटनाहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । यसम ख्रीष्टको प्रथम र दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट भबिस्यबाणी उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ नियम: नयाँ नियममा पुरानो नियले ख्रीष्टसम्बन्धी उल्लेख गरेका उहाँको जन्मा, सेवाकाई, मृत्यु, र पुनरुउथान ( resurrection) सम्बन्धी भबिस्यबाणी कसरी पूरा भए सो कुराको विवरण छ । साथै यसमा ख्रीष्टको असाधरण अनि सिद्ध जीवनको विवरण र उहाँ अदभूत कार्यहरुका विवरणहरु उल्लेख गरिएको छ । ख्रीष्टको बलिदान र उहाँको बौरिउठाईको घटना नयाँ नियमको प्रमुख विषय हो ।
४. बाइबल ४० जना विभिन्न पृष्ठभुमीमा रहेका परमेस्वरका पबित्र जनहरूले परमेस्वरको पबित्र आत्माको प्रेणाद्वारा लेखेका हुन । बाइबल लेखन १६०० वर्ष लागेको थियो । किनभने यो मानिसको आफनै ईक्षाद्वारा लेखिएको थिएन । जब परमेस्वरको अग्मबानी आयो तब मात्र लेखियो । यसको लेखकहरु कोही राजा थिए, कोही प्रधानमन्त्री, कोही बिद्वान,कोही माछुवा, कोही गोठाला, कोही राजकर्मचारी, कोही पुजारी भने एक जन बैध थिए ।
साधारण त ती लेखकहरूले भिन्न भिन्नै समयमा भिन्न भिन्नै ठाउमा बसेर लेखे । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको लेख फरक हुनुपर्ने हो । किन एउटा पुस्तकले अर्को पदलाई बिरोध गर्दैन ? किन एकाअर्कालाई समर्थ गरेको छ ? किनभने बाइबलको मुख्य लेखक मानिसहरू थिएनान परमेस्वर हुनुहुन्छ । सबै पबित्रशास्त्र परमेस्वरको प्रेरणा द्वारा दिएको हो । बाइबलका सबै पुस्तक परमेस्वरका प्रेरणाद्वारा दिएका थिए । यसै कारण बाइबलका लेखक विभिन्न भएको भए पनि आपसमा पुर्णरूपमा मिलेर रहेका छ्न । परमेस्वर नै बाइबलको वास्तविक लेखक हुनुहुन्छ ।
५. बाइबल ले भन्छ " पहिले यो जान -पबित्रशास्त्रको कुनै पनि भविस्यवाणी आफ्नु निजि ब्याख्याबाट भएको होइन । किनकि कुनै पनि समयमा भबिस्यबाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन, तर परमेस्वरका पबित्र जनहरु पबित्र आत्माद्वारा प्रेणा पाएर बोले । " १ पत्रुस१:२०-२१
परमेस्वरले आफ्नु वचन लेख्ने क्रममा मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो । यर्मिया नामको ब्यक्तिलाई भन्नू भयो " हेर मैले मेरो वचनहरु तेरो मुखमा हालिएको छु ।" यर्मिया१:९ पुरानो नियम मात्र ३८०० वटा सन्दर्भ छ्न । जसले बाइबल परमेस्वरको वचन हो भनी हामीलाई बताउँछ । बाइबलको पहिलो पुस्तकको पहिलो पदले महत्त्वपूर्ण सत्यता प्रस्तुत गरेको छ " सुरुमा परेस्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो" उत्पती१:१ उहाँ परमेस्वरका नदेखिने गुणहरु " "सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा स्पष्ट देखिएका छ्म "
सृष्टिले प्रकट गर्छ कि त्यहाँ परमेस्वर हुनुहुन्छ भनेर तर यो प्रकट गर्दैन कि परमेस्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर । हामी यहाँ किन छौ? परमेस्वर कस्तो हुनुहुन्छ ? यश जीवन पछि के हुन्छ ? सो विषयमा चाहिँ बताउदैन । त्यसैले हाम्री सृष्टिकर्ता मालिकले हामीलाई आफ्नु वचन उपहारको रूपमा दिनुभएको छ ।
६.बाइबले हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ हाम्रो आधुनिक पात्रो "सात दिनको एक हप्ता" हुन्छ । बाइबलमा आधारित छ । परमेस्वरले सृष्टि गर्नुभयो र सातौ दिनमा विश्राम लिनु भयो चोरी नगर्नु, हत्या नगर्नु, झुठो नबोल्नु, जस्ता आज्ञा पहिलो पटक बाइबलमा उल्लेख गरिएका थिए । बिस्वभरी नै ईं. पू (A.D) प्रयोग गरिन्छ यसले येशू ख्रीष्ट जन्मेको आज २०१६ वर्ष भएको देखिन्छ ।
"यदि कुनै मानिस बाइबलसँग परिचित छैन भने, उसले नोक्सान भोगेको छ, जसमा उसले यथासंभव सुधारर्नु उत्तम हुन्छ । बाइबलको पूर्ण ज्ञान चाहिँ कलेज शिक्षा भन्दा बढी अनमोल छ " थिओडो रुजबेल्ट सयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति
"बाइबल एउटा केवल पुस्तक मात्रै होइन, तर एल जिवित सृष्टि हो, जसमा शक्ति छ कि यसलाई बिरोध गर्नेहरूमा यो बिजयी बन्छ " बिश्व बिजेता नेपोलियन
विकिमिडिया कमन्समा बाइबल सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=बाइबल&oldid=918991" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १२ सेप्टेम्बर २०२०, २२:४२
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २२:४२, १२ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।